चकलेट मन पर्छ ? स्वास्थ्यका लागि कति फाइदा, कति हानी? « News24 : Premium News Channel
चकलेट मन पर्छ ? स्वास्थ्यका लागि कति फाइदा, कति हानी?
अनुसन्धानले चकलेट (कोको) बाट हुने स्वास्थ्य सम्बन्धी यस्तै केही अनौठा फाइदा पुष्टि गरेका छन्। गएको दशकमा अनुसन्धानकर्ताहरूले चकलेटमा झाडापखाला रोक्ने रासायनिक तत्व फेला पारेका थिए। बेलायती रानी भिक्टोरियाका पालामा पनि बेलायती चिकित्सकहरू भिरिंगीको उपचारमा कोको उपयोग गर्थे।
(क्यारिना स्टरस, विशेष संवाददाता सिएनएन)
फुर्सदमा सुन्दर रहन अपनाउनुहोस् यी घरेलु उपाय –